Uzenza Kanjani Izandiso Zezinwele Eziyisiqeshana Ekhaya (Ividiyo ye-DIY yesinyathelo ngesinyathelo) – SL Raw Virgin Hair LLC.
Uzenza Kanjani Izandiso Zezinwele Ze-Clip-in Ekhaya (Isinyathelo Ngesinyathelo I-DIY)
Izandiso zezinwele ze-DIY zokunamathisela zilula kakhulu uma usuwazi amathuluzi nenqubo. Nansi inqubo yethu yesinyathelo ngesinyathelo ukwenza izandiso zezinwele ezinhle kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Ukwenza ezakho izandiso zezinwele ezinamathiselwe kukunika amandla kanye nenkululeko yokukhetha ukuthi usebenzisa luphi uhlobo lwezinwele, ikhwalithi, ubude, nezitayela.
Ngakho-ke, kuhle ukwazi ukuthi ungenza kanjani izandiso zezinwele zokunamathisela ekhaya. Futhi ubuhle bale nqubo ukuthi kulula futhi kushesha kangakanani ukwenza.
Nansi inqubo yethu yesinyathelo ngesinyathelo yokuthi uzenza kanjani ezakho izandiso zezinwele zokunamathisela ekhaya.
Izindwangu zezinwele zemvelo
Inaliti (inaliti yokuthunga egobile) kanye nentambo
Itheyiphu yokulinganisa (ongakukhetha)
Kungani singancomi ukuthenga inqwaba ‘yezinwele ze-ponytail’ ezikhululekile ukuze uthole izandiso ze-DIY clip-in
Kuzoshibhile, yebo. Kodwa futhi kuzodla isikhathi ngokwedlulele (futhi kube nzima kwabanye) ukusebenza ngezinwele ezixekethile ukuze uzame ukwenza i-weft ngokwabo. Sikhuluma nge-DIY, hhayi ukuzihlukumeza.
Ngakho-ke, sincoma izinwele zemvelo ku-weft
Sikhetha futhi ukusebenzisa izandiso zezinwele zabantu ngenxa yokuguquguquka ekunakekeleni nasekwenzeni isitayela ngaphandle kokulimaza izandiso. Uzokwazi ukufaka umbala, ukugoqa, insimbi eyisicaba, ukugeza nokusika izinwele zemvelo ngaphandle kokukhathazeka ngokulimaza izinwele. Futhi zizobukeka ziseduze kakhulu nezinwele zakho zangempela.
Ngohlobo lwenqwaba yezinwele ezixegayo kumaweft, sincoma ukuthi ubheke lokhu 100% kwezinqwaba zezinwele ezikhululekile noma t64>izinwele eziluhlaza zemvelo ezinamagagasi.
Isinyathelo ngesinyathelo inqubo yokwenza izandiso zezinwele zokunamathisela
Isinyathelo 1. Lungisa i-weft
Phinda inaliti yakho, uphindwe kabili intambo, futhi ubophe emaphethelweni.
Thola izinyanda zakho, qaqa, futhi kabili ama-wefts. Bese uwathunga ndawonye. Ukuphinda kabili ama-wefts kuqinisekisa ukuthi uthola ukubukeka okugcwele ngokufaka kwakho iziqeshana.
Qiniseka ukuthi uthunga kahle iziphetho ngentambo engena ku-weft ukuze ugcine iziphetho ziphansi. Khona-ke ungakwazi ukuthunga ndawonye indawo elukiweyo udlulela phezulu ukuze uthole izingxenye eziphakathi nendawo kusukela ekugcineni kuya kwesinye.
Isinyathelo 2.Kala futhi ugunda izinwele
Linganisa intamo yentamo yakho iqala futhi ime phakathi nje komugqa wezinwele Awufuni ukuthi imiphetho yezandiso ibheke ngaphandle.
Ungasebenzisa iteyiphu yokukala ukwenza lokhu. Noma ungakwazi ukukala amathrekhi ngokubeka izinwele lapho bezizonqunywa khona ekhanda lakho bese ugunda izinwele.
Linganisa ukusuka endlebeni ukuya endlebeni uma usuqede indawo ye-nape.
Njengoba usunezilinganiso, sika i-weft (ukusika kusuka phezulu kuya phansi) kuya kusayizi owulinganise.
Isinyathelo 4 Thunga kwiziqeshana
Thunga eziqeshaneni ngekama ngaphandle.
Faka inaliti phakathi kwe-weft kanye nesiqeshana. Ufuna ukusebenzisa iziqeshana eziningi ze-wig njengoba kudingeka ukuze uvikele isiqeshana ezinweleni zakho. Lokhu kusho noma yikuphi ukusuka kuziqeshana ezingu-2-5 kuye ngobubanzi besandiso.
Ngena embobeni yesiqeshana okungenani kabili ukuze uqinisekise ukuthi ivikelekile.
Qaphela ukuthi awuthungi isiqeshana sewigi emuva njengoba uzogcina ngokuvuleka kwamakamu ngendlela engafanele. Ukugebenga ukuze uzungeze le nkinga ukuvula iziqeshana ngaphambi kokuthi uqale ukuthunga.
Njengoba iziqeshana zakho sezilungile, ungazinquma ukuze zihlangane nezinwele zakho.
Ungalali kuziqeshana zakho, ngakho zisuse ngaphambi kokulala
Unganamatheli eziqeshaneni zewigi ngoba ngeke zihlale isikhathi eside uma uzithunga ku
Futhi wenza kanjalo izandiso ze-DIY clip-in yakho. Kulula, kulula, futhi kuyathengeka.
Futhi ngokucophelela, uzokwazi ukusebenzisa kabusha i-clip-ins yakho ye-weft hair loose futhi ubenze bahlale izinyanga ezimbalwa